Shiinaha 1200Tex 2400Tex Maro adag toos Roving Ka Shiinaha warshad iyo alaab | Yuniu
Tooska ah E-glass fiber Glass Roving wuxuu la jaan qaadi karaa cusbada polyester-ka unsaturated iyo vinyl ester resion.It inta badan waxaa loo isticmaalaa qeybaha gawaarida, qalabka korontada, qolofka taangiga, taarikada haanta biyaha ee isku dhafan iyo qalabka isboortiga, iwm.
Waxqabadka wanaagsan ee la jarjaray, qaybinta wanaagsan, ka-hortagga iyo socodka wanaagsan ee hoos yimaada saxarada caarada; Xawaaraha acetone kala duwan sida ku xusan codsiyada kala duwan; Qalabka isku dhafan waa xoog farsamo sare, waxqabad dusha sare leh.
Shayga TEX Dhexroor (um) LOI (%) Mol (%) Cusbi Vompatible
Fibreglass Roving toos ah 2000-4800 22-24 0.40-0.70 .100.10 UP
Fibreglass Roving toos ah 300-1200 13-17 0.40-0.70 .100.10 UP VE EP
Fibreglass Roving toos ah 300-4800 13-24 0.40-0.70 .100.10 UP VE EP
Fibreglass Roving toos ah 300-2400 13-24 0.35-0.55 .100.10 UP VE EP PF
1.Even xiisad, waxqabadka jarjaran oo aad u wanaagsan iyo kala firidhsan, awood socodka wanaagsan oo ka hooseeya saxaafadda caaryada.
2.Fur oo dhammaystiray qoyan.
3.La'aan hoose, fuzz lahayn
4.High farsamo sare.
Alaabooyinka la dhammeeyay waxay la kulmi karaan xoog dhismeedka daaraha dusha sare leh waxayna u adkeysan karaan awoodda kartida daalka, ku habboon
tuubbooyinka cadaadiska sare leh iyo weelasha cadaadiska iyo taxanaha tuubbada dahaaran iyo danab sare / hooseeya ee elektaroonigga ah
berrinka Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay tiirarka teendhada, albaabada FRP iyo daaqadaha iwm.
Duub waliba wuxuu kudhowaad yahay 18KG, 48/64 duub oo saxaarad, 48 duub waa 3 dabaq halka 64 duubna ay yihiin 4 dabaq. Kunteenarka 20-foot ah wuxuu hayaa qiyaastii 22 tan.
Maraakiibta: badda ama hawada
Faafaahinta Gaarsiinta: 15-20 maalmood kadib helitaanka lacagta hormariska ah iwm.
S1: Ma waxaad tahay warshad? Halkee ku taal
A: waxaan nahay soo saare.
J: Badanaa 1 Ton
Xirmo Gaarka ah: waxay ubaahantahay inaad kubixiso hadba xaalada dhabta ah.
J: Badanaa waxaan soo xiganaa 24 saac gudahood ka dib marka aan helno baaritaankaaga. Haddii aad si deg deg ah u heshid qiimaha pls na soo wac ama noo sheeg emaylkaaga, si aan kaaga soo jawaabno mudnaanta.
Q5: Sideed kubixisaa khidmadaha muunadda?
J: Haddii aad u baahan tahay shaybaar ka mid ah keydkeenna, waxaan ku siin karnaa bilaash, laakiin waxaad u baahan tahay inaad bixiso khidmadda xamuulka. .
Soo-saarista Maaraynta Maaddada 'YuNiu'
Guushaadu waa shaqadeena!
Wixii su'aalo ah, fadlan si xor ah noola soo xiriir.
Hore: Maro adag Roving Maro adag Yarn
Xiga: Fiberglass Emulsion e dhalada muraayadda dhalada ah 450